UJosé Antonio Ramos Sucre, imbongi eqalekisiweyo okanye umntu ozeka kade umsindo? | Uncwadi lwangoku
UJosé Antonio Ramos Sucre: imbongi eqalekisiweyo?
UJuan Ortiz | | Uvavanyo, Ababhali, iintlobo, Iincwadi
UJosé Antonio Ramos Sucre, imbongi eqalekisiweyo?
Ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, isixeko saseCumaná (eVenezuela) sabona ukuzalwa komnye wababhali abanesiphiwo kunye nabamele kakhulu, uJosé Antonio Ramos Sucre. Umbhali wayevela kusapho olulungiselelwe ngokwengqondo, apho utata wakhe, uJerónimo Ramos Martínez, wazama ukuqinisekisa ukuba uqeqesho kwezemfundo luyaphumelela. Kwelakhe icala, umama wakhe, uRita Sucre Mora, waba nefuthe elikhulu kubuchule bokunxibelelana nembongi yomncinci. Kwakungenxa yakhe ukuba kwakukho ubudlelwane bosapho kunye noAntonio José de Sucre, iqhawe elaziwayo laseVenezuela, njengoko wayengumtshana omkhulu weGrand Marshal.
Ukususela ebuntwaneni imbongi ebonakalaliswa ngokuzithanda kakhulu kwaye elilolo. URamos Sucre wachitha iiyure zexesha lakhe yedwa ekufundeni, ukuhlakulela ingqondo yakho ngokwakho. Ngelishwa, ubomi bakhe babumnyama yimeko eyayimphethe kakubi kuba wayesemncinci kwaye yammakisha ngokunzulu: ukulala.
1 URamos Sucre, isithandi sobulumko, imbongi kunye ne-Consul
2 UJosé Antonio Ramos Sucre, imbongi eqalekisiweyo?
2.1 «Prelude» (njengophawu lokuzisola kwakhe okukhulu)
URamos Sucre, isithandi sobulumko, imbongi kunye ne-Consul
Kunye noqeqesho lwakhe lokuzifundisa, umbhali wafunda kwiKholeji yeSizwe yaseCumaná. Kweli ziko kwiphondo laseSucre, wafumana isidanga se-bachelor kwifilosofi eneminyaka engama-20 (1910). Amabanga akhe, ewe, ayebalasele.
Nangona umbhali wayefuna ukungena kwiCentral University yaseVenezuela ngaphandle kokuchitha ixesha, ubhubhane owavela kwisixeko saseCaracas wakuthintela oku ukuba kungenzeki.. Nangona kunjalo, kwaye enkosi kuqeqesho lwakhe lokuzifundisa, kwakamsinya nje ukuba uRamos Sucre aqalise kwakhona imisebenzi yokufunda, wenza uvavanyo lokungena kwakhe wangena kakuhle ngo-1912.
Kwakulithuba lokulinda ukuba uJosé Antonio aqalise ukubonakala njengembongi ngokupapasha imisebenzi kwimithombo yeendaba zengingqi ezinje Iziqhwala. Kwiminyaka engama-21 kuphela ubudala, umbhali wayeqala ukwenza uphawu kuyo Iimbongo zaseSpain zaseMelika.
Impembelelo yefilosofi emsebenzini wakhe yaqatshelwa, kunye nothando lweelwimi kwiinguqulelo zakhe ezicocekileyo. Umbhali, nangona ebekhe warhoxa, uhlala evelisa izicatshulwa zeentlobo ngeentlobo, kwaye abe nabaphulaphuli abaninzi abathandwayo ngosiba lwakhe. Hayi kwiidayari ezililize ezinje IHerald y El Nacional Bavula iindawo zabo kwiprozi ebalaseleyo kaRamos Sucre.
Ngokuthe ngcembe, ubukrelekrele bukaRamos Sucre bamkhokelela ekubeni anyuke ileli eluntwini nakwipolitiki, kangangokuba ngo-1929 wabamba isikhundla se-Consul yaseVenezuela eSwitzerland. Ukutyunjwa kwakungaphezulu kokuncoma, nangona kunjalo, ububi obabumphethe buqhubeka, de bonakalisa umhlaba wakhe.
Kwangelo xesha uRamos Sucre waphumelela indawo kwindawo yemibongo yaseVenezuela, ukuphuthelwa kwamophula. Imibongo yakhe ingumzekelo ocacileyo woku, yayikukubaleka ukubonisa ukubandezeleka kwakhe. Umbhali wenze lukhulu ekuphuculeni imeko yakhe, kangangokuba waya ezibhedlele nakwiiklinikhi zengqondo eyokufumana isisombululo. Into ababenako ukuyiphilisa yayiyi-amebiasis eHamburg, kodwa iingxaki zempilo ezibangelwa kukungalali buthathaka.
Kuphantse kungaqondakali ukuqonda indlela, kunye nobomi bempumelelo yobuqu, iintlungu kunye nokuzisola okudluliselwe kwinqanaba lomzimba. Nangona kunjalo, ukufunda imibongo efana no "Prelude" kuyenza icace eyona nto yayisenzeka ebomini bakhe.
Isivakalisi esivela kumbongo kaJosé Antonio Ramos Sucre.
Hayi, uRamos Sucre wayengenguye "imbongi eqalekisiweyo", wayeyindoda enesipho esikhulu awayesazi ukuba angaqaqamba njani, kodwa ngelishwa isiphelo sokungalali siphawule isiphelo sakhe. Ngomhla wokuzalwa kwakhe engama-40, kwaye emva kwemizamo eliqela engaphumelelanga, imbongi yazama okokugqibela ukuthatha ubomi bayo, kwaye yaphumelela. Ekuphela kwento ekunokuthi kongezwe ukunika ubunyani besichazi apho kufanelekileyo abaninzi kukuba khange afe kwangoko, kodwa ukuba wakhathazeka iintsuku ezi-4 zilandelelana emva kokutya idosi ye-veronal.
«Prelude» (njengophawu lokuzisola kwakhe okukhulu)
«NDINGATHANDA ukuba sebumnyameni obungenanto, kuba ilizwe likhohlakele libuhlungu imvakalelo zam kwaye ubomi buyandikhathaza, intanda engathandekiyo endixelela ukukrakra.
Emva koko iinkumbulo ziya kuba zindishiyile: ngoku bayabaleka babuya nesingqi samaza angadinwayo kwaye bayabhomboloza iingcuka ebusuku ezigubungela intlango nekhephu.
Intshukumo, uphawu olucaphukisayo lwenyani, iyalihlonipha indawo yam yokuhlala engummangaliso; kodwa ndiza kuyinyuka ngengalo ngokufa. UnguBeatrice omhlophe, kwaye, emi enyangeni, uya kundwendwela ulwandle lweentlungu zam. Ngaphantsi kwesipelingi sayo ndiya kuphumla ngonaphakade kwaye andisayi kuphinda ndizisole ngobuhle obonileyo okanye uthando olungenakwenzeka ».
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » UJosé Antonio Ramos Sucre: imbongi eqalekisiweyo?
I-Allende, i-Espinosa, i-Asensi, iVillar, iMoccia ... 8 abathengisi abathengisayo kwezi nyanga
IsiLatin: utata wezothando